(1)ရှေးကဗျာများထဲမှ တောသူတောင်သားများရဲ့ဘ၀(၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Poetry » (1)ရှေးကဗျာများထဲမှ တောသူတောင်သားများရဲ့ဘ၀(၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Feb 8, 2011 in Poetry | 35 comments
(1)“ရှေးရှေးက ကဗျာများထဲမှ တောသူတောင်သား များရဲ့ဘ၀”(၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ)
စနေမင်းလက်ထက်(1060)ပါတ်ဝန်းကျင်တွင် ဘုရင့်အမူ့တော်ထမ်းဆောင်ရင်း ကဗျာလင်္ကာများကို ရေးစပ်ခဲ့တယ်လို့လည်း မှတ်သားရပါတယ်။
1076ခုနှစ် တွင်ထီးနန်းစိုးစံသော မှန်နန်းရှင်ခေါ်စနေမင်းလက်ထက်တွင်လည်းအမူထမ်းရင်း
ပထမဦးစွာ “လက်ျာရွှေတောင် “ဘွဲ့အမည်ကို အပ်နှင်းခံရပြီး မန်ကျီးတုံရွာကို အပိုင်စားရခဲ့ပါတယ်။
1095ခုနှစ်မှာနန်းတက်တဲ့ “ဟံသာဝတီရောက်မင်း” လက်ထက်မှာတော့ “မင်းရဲမင်းလှကျော်ထင် “ဘွဲ့
နဲ့အတူ လွှတ်တော်ဝန်ကြီးအဖြစ်ထိ ရာထူးတိုးတက်ပေးခဲ့ပြန်ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင် သာမန်လူတန်းစားများတွင်အမြင့်ဆုံးဟုဆိုနိုင်သော “ဘုရင်ငယ်တစ်ဆူ” ဆိုသော
အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်သော “ ပဒေသရာဇာ “ဟူသောဘွဲ့ ကိုအပ်နှင်းခြင်းခံခဲ့ရပြန်ပါတယ်။
ကံကြမ္မာနိမ့်ပါးချိန်ကျရောက်တဲ့အခါမှာတော့ 1113ခုနှစ်အရောက်မှာ မွန်ဘုရင်က အင်းဝကိုစစ်နိုင်သော
အခါ အင်းဝဘုရင်နှင့် ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာအပါအ၀င် သားသမီးဆွေးမျိုးညာတိတို့ကို ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်
လာရာသံလျှင်ခေါ် တညင်မြို့ မှ ကျိုက်ခေါက်စေတီအနီးတွင် မောပန်းခြင်းဒဏ်ကြောင့် လူကြီးရောဂါဖြင့်
၀န်ကြီးပဒေသရာဇာရဲ့ ကျန်ရှိသောရုပ်ကလပ်ကို ကျိုက်ခေါက်ဘုရားတောင်ကုန်းမြောက်ဘက်မျက်နှာမှာ
၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ ရေးသားခဲ့သောပျို့ကဗျာမြောက်မြားစွာရှိခဲ့ပါတယ်။ဒီအထဲကမှ နန်းတွင်းမှာအမြဲခစားသူ
၀န်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်ပေမယ့် သာမန်လူတန်းစားတို့ရဲ့ဘ၀ကို ဖွဲ့ဆိုခဲ့တဲ့ကဗျာလေးကို ရွေးချယ်ပြီးတင်ပြပေးလိုက်
စင်အောင်ခုတ်ထစ် နုမျစ်ကယ် ထန်းဦးရေ
ငုံးကြက်ကယ်ဖွတ်မြွေ ၀ံပုလွေ မနေထွက်လာကြသည်တည့်လေး။
၀န်ကြီးပဒေသရာဇာကို အချို့က မင်းပဒေသရာဇာဟုလည်းခေါ်ဆိုကြပါတယ်။
အထက်ဖော်ပြပါ လယ်သမားဖွဲ့နှင့်ထန်းတက်သမားဖွဲ့မှာ နှစ်ပုဒ်စလုံးရေးစပ်ပုံဆင်တူပါသည်။
ထန်းတက်သမား ကဗျာကို မြန်မာသံအဆိုတော် ကိုမင်းနောင်က သီချင်းအဖြစ်သီဆိုဘူးသလို
လယ်သမား သီချင်းမှ “ပျော်ပျော်ပါးပါးမယားနှင့်ဆွေငယ်လင်” ဆိုသောစာသားလေးဖြင့်လည်း
အဆိုတော်ကလည်း ကိုမင်းနောင် ဘဲသီဆိုထားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၀န်ကြီးပဒေသရာဇာသည် နတ်ချင်းများဖြစ်သော “ပန်းဘဲမောင်တင့်တယ်”
“ရွှေဖျဉ်းညီနောင်” တို့အကြောင်းကိုလည်းစပ်ဆိုခဲ့ဘူးသလို ဆင်ဖမ်းသမားအကြောင်းကိုလည်းဖွဲ့ဆိုထားတာကို
ညောင်ရမ်းခေတ်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့(900-1095)အတွင်းမှာ ထင်ရှားခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာနောက်မှာ
ဦးဆောင်း ဦးကြီးတို့ကလည်း သာမန်တောသူတောင်သားများဘ၀ကို ကဗျာလင်္ကာများနဲ့ ဖွဲ့ဆိုထားတာကို
ကျွန်တော်အမြင်အရပြောရရင်တော့ ပဒေသရာဇာရဲ့ ကဗျာများက ပိုမိုရှင်းလင်းပြီးသရုပ်ပါတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။
ကိုပေါက်လက်ဆောင် (ရှေးကဗျားများကို ပြန်လည်ကူးယူဖော်ပြခြင်း)
ပါတ်ဝန်းကျင် = ပတ်ဝန်းကျင်
အဓိပ္ပါယ် = အဓိပ္ပာယ်
သံလျှင် = သန်လျင် ဟီး အမြင်မတော်လို့နော်……
တစ်ဆက်တည်း ၀န်ကြီးပဒေသရာဇာ အုတ်ဂူပုံကော ဘယ်မှာလဲ ပါဘူးလား။
အဲဒီကဗျာလေးထဲက ပြီးလျှင်ရေမရှာခွေးသာကျွေးတော့သည် ဆိုတာလေးတွေ့တော့ သူငယ်ချင်းတယောက်အဖြစ်ကလေးမှတ်မိလို့ ..။ ၁၉၇၅ ခုနှစ်ကျနော်တို့ ၁၀ တန်းအောင်တော့ မောင်တင်ဆိုတဲ့သူငယ်ချင်းက နွမ်းပါးလို့ အလုပ်ရှာလုပ်ရပါတယ်။ အညာကရွာတရွာမှာကျောင်းဆရာသွားလုပ်တယ်။
မနေနိုင်ဘဲပြန်ပြေးလာရပါတယ်။ သူပြောတာက ငါဆင်းရဲပါတယ်ကွာတဲ့ ဘယ်အလုပ်မျိုးမဆိုလုပ်နိုင်တယ်တဲ့။ အခုဟာက ထမင်း စားပြီးအိုးတွေခွက်တွေကို မဆေးဘူးမောင် .. ခွေးတွေကိုရက်ခိုင်းတယ်တဲ့ ..။ အဲဒီတုန်းက ကျနော်တို့သိပ်မယုံကြဘူး။ နောက်ဒီကဗျာလေးကိုဖတ်မိတဲ့အရွယ်မှာမှ .. ဟ .. တကယ်ပါလားလို့သိရတယ်။
အခုလောက်ဆိုရင်တော့ အခြေအနေတွေပြောင်းလောက်ကောင်းပါ၇ဲ့။ စစ်ကိုင်းတိုင်းထဲကရွာလေးတရွာပါ။
စာရေးတဲ့သူကမန်းလေးကဗျ။ ဓါတ်ပုံရှိချင်မှရှိမှာပေါ့ အော်ဒါနဲ့ .. မန်းလေး = မန္တလေးနော်
တော်ကြာ သတ်ပုံပြင်ခံနေရမှာစိုးလို့ ဆရာမရေ့။
မှားသေးသဗျ။ သတ်ပုံအပြင်ခံနေရ (အမှန်) = သတ်ပုံပြင်ခံနေရ (အမှား)
အသည်သားတွေအကြောင်းရေတဲ့ကဗျာတွေ အရမ်းကြိုက်တယ်။ ရာသီဥတု တောတောင်အောကာင်းရေးထားတဲ့ ကဗျာတွေလုပ်ပါဦး ဦးပေါက်။
ဟုတ်ကဲ့ပါ မြင်ဖူးချင်လို့ တောင်းမိတာပါရှင်။ ဓါတ်ပုံမဟုတ်ပါ ဓာတ်ပုံသည် စာလုံးပေါင်းအမှန်ဖြစ်ပါသည်။
မဆလခေတ် သတ်ပုံစာအုပ်ကို ကျနော်တို့အတည်မယူပါ။
ဒီကဗျာတွေဖတ်မိတော့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀ကို သတိရသွားတယ် … ကျွန်မတို့ခေတ်က ကဗျာတွေကို အလွတ်ကျက်ခဲ့ရတယ် ..
သန်လျင် ကျိုက်ခေါက်ဘုရားနားက ၀န်ကြီး ပဒေသရာဇာ အုတ်ဂူကို ပြန်ဖော်ပြီး အုတ်ဂူထဲမှာ ဌာပနာထားတာတွေကို ပြထားတဲ့ ပြခန်းလေးတစ်ခု ရှိတယ် … တပို့တွဲလ ကျိုက်ခေါက်ဘုရားပွဲတော်ကို သွားရင်း စိတ်ဝင်စားရင် သွားကြည့်လို့ရတယ် …
အခုခေတ်မှာတော့ ရေက အရင်လောက်မရှားတော့ပါဘူး။
နေရာတိုင်းမှာ ရေတွင်းတွေတူးထားပေးတော့ အဆင်ပြေကြပါတယ်။
2005ခုနှစ် မှာ ကျောက်ပန်းတောင်းဘက်သွားတဲ့လမ်း က ထန်းတောတွေနားမှာကားပျက်ရော။
ကားက ရေတိုင်ကီကရေဆူတော့ရေလိုက်ရှာတာ ဘယ်မှာမှမရဘူး။
ထန်းလျှက်ချက်တဲ့ တဲတွေ့တော့ ရေတောင်းတာ နည်းနည်းတော့ပေးတယ်။
ဒါပေမယ်မယ့် သူတို့ ရေထည့်ထားတဲ့ ရေအိုးကိုမြင်တော့ ကားထဲကိုရေယူပြီးမထည့်ရက်တော့ဘူးဖြစ်သွားတယ်။
အဲတာက ဟိုအတော်ဝေးဝေးမှာသွားခပ်ရတာဆိုတာနဲ့ဘဲ သူတို့ဆီက ပုံးငှား ကိုယ်တိုင်သွားပြီးရေဆွဲခဲ့ရပါတယ်။
အခုတော့အရင်နဲ့မတူလို့ ကျေးရွာဝါဒတွေပြောင်းကုန်လို့ တိုးတက်နေပြီလို့ထင်ရပါတယ်။
မြန်မာ့အကောင်းဆုံးတွေကို စာရင်းလုပ်တင်ပေးချင်နေတာ .. ကံကောင်းရင် ကိုပေါက် ဆောင်းပါးတွေထဲ ပါလာမှာပဲ..။
ပိစိကွေးက ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ ကိုအမှန်လို့ထင်နေတာ…. ကျနော်၊ကျမက အမှန်လားဟင်……
ဦးပေါက် ကဗျာတွေကိုပြန်ဖတ်တော့ ဆယ်တန်းတုန်းကဘ၀ကိုပြန်သတိရတယ်…… ဘ၀မှာအပျော်ဆုံးအချိန်ကတော့ ဆယ်တန်းတုန်းက အချိန်ပဲ….. သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်းသတိရတယ်…….
မဲဇာတောင်ခြေ ကဗျာ ကိုကောဘယ်သူရေးတာလဲသိရင်ပြောပြပေးကြပါခင်ဗျာ
လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်ကြီးရေးပါတယ်….. ပိစိကွေးတို့9တန်းတုန်းကသင်ခဲ့ရပါတယ်…………
အကျွှန်တော် အဲ.ဒီကမှ ကျွန်တော်
ဒီကနေမှ ကျနော် ဖြစ်သွားတာ
လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်ကြီး ဟုတ်ဖူးလား။ ထောင်ချောက်မဆင်နဲ့နော်။ လူတိုင်းသိထားတဲ့ဟာကို။ နအဖလက်ထက်မှာတော့ လက်ဝဲဆိုရင်ကွန်မြူနစ်၊ လက်ယာဆိုရင် အနောက်အားကိုးလို့ ကင်ပွန်းတပ်လေ့ရှိလို့ ဘေးရန်လွတ် ကြားနေသုန္ဒရအမတ်ကြီးလို့ ခေါ်ကြောင်းပါ။
ဟီးဟီး……… ဟုတ်ပါကြောင်း ဦးကြောင်ကြီးကို ထောက်ခံပါတယ်…….. ဒါနဲ့ဦးကြောင်ကြီး ထမင်းစားပြီးပြီလား…….
အော်… ဒီပိုစ့် ဖတ်မိမှပဲ… ကိုယ့်ကိုယ်ကို မြန်မာစာ ချို့တဲ့မှန်း သိတော့တယ်… ငြင်းနေတဲ့စာလုံးတွေမှာ ဘယ်ဟာက အမှန်၊ ဘယ်ဟာက အမှားလဲ ဆိုတာ မသိဘူးဖြစ်နေတယ်…
နှီးဒေါင်းလန်းနဲ့ ထမင်းစားတာတော့ အတော်သဘောကျတယ်။
ဒါနဲ. အခု အစိုးရက လက်ဝဲကောလက်ယာကော အားမကိုးတော. ဘာကိုအားကိုးလဲဟင်:P
နုစဉ်ကတော့ .. အလွတ်ကျက်ခဲ့ဖူးတာပေါ့ကွယ်..။
ဦးယာရဲ့ … မင်းနန်ပျို့ လေးတော့ …ပြန်ဖတ်ချင်သား..။
မဲဇာတောင်ခြေ၊ စီးထွေထွေတည့်၊ မြစ်ရေ၀န်းလည်၊ မြိုင်တောဆီက၊
ရွှေပြည်ကိုသာ၊ တရှာတော့မိ၊မိုးရှိရှိလျှင်၊ သီရိကျက်သရေ၊ တက်ဖြိုးဝေသား၊
အောင်မြေကြော့ကြော့၊ ကုန်းမော့မော့နှင့်၊ ဘိုးတော့်ကောင်းမှု၊တည်ထားပြုသည်၊
ဇမ္ဗူ့ ဆီမီး၊ ခြောက်ရောင်ညီးမျှ၊ ဂူကြီးသခင်၊ ရွှေလင်းပင်နှင့်၊
ရွှေခြင်္သေ့မြွေ၊ စ၍ရေသော်၊ ရွှေစေတီကြီး၊ အသီးသီးတည့်၊ ပိတ်ဆီးခြယ်သန်း၊
လျှပ်ရောင်တန်းမျှ၊ ရွှေနန်းရွှေဘုံ၊အလုံးစုံကို၊ အာရုံမျက်မြင်၊
ဖူးမျှော်ချင်၍၊ သည်တွင်ရွှေမြို့၊ သည်သို့စေတီ၊ သည်ဆီရွှေနန်း၊
ဖြောင့်တန်းတော့မည်၊ စိတ်ကရည်သည်၊ ရွှေပြည်ဌာနဝေးသော်ကြောင့်။ ။
သဲသာသောင်မြေ၊ မြစ်ကမ်းခြေလည်း၊ အကြေတစ်ပြင်၊ တို့အောက်ခွင်ဝယ်၊
ရေရှင်ပတ်ဝန်း၊ ပျော်ဖွယ်ထွန်းလိမ့်၊ တစ်ကျွန်းလောက်ပင်၊ဝေးမည်ထင်ခဲ့၊
စီးသွင်ညိုရစ်၊ မဲဇာမြစ်လည်း ၊ ထစ်ထစ်ထွန်းဘိ၊ ချုံအတိနှင့် ၊
တောကြီးဆိတ်ညံ၊ ဆည်းကျံကျံဝယ်၊ ဓူဝံမပေါ်၊မမျှော်ပါရ၊ နေကိုတလည်း၊
ဘယ်ကရှေ့နောက်၊ ဘယ်တောင်မြောက်ဟု၊ တွေးထောက်မမှန်၊ ဖန်ဖန်အံ့သြ၊
ကြံတိုင်းမောစွ၊ ဘယ်တောဘယ်မြိုင်၊ မသိနိုင်ခဲ့၊ မခိုင်စိတ်ဝမ်း၊
နေ့တိုင်းလွမ်းရှင့်၊ ကင်းစင့်တောင်က၊လေဦးစ၍၊ နောက်မှလေရှည်၊ အတည်တည်သည်၊
လေပြည်လာက အေးသော်ကြောင့် ။ ။
ပွဲခါညောင်ရေ၊သွန်းမြဲပေတည့်၊ ရိုသေသဒ္ဓါ၊ ထုံးစဉ်လာဖြင့်၊ မဲဇာရပ်သူ၊
တောင်းဆုယူသည်၊ ရွှေဂူတော်နှင့်၊ ရှုတိုင်းတင့်သား၊ မိုးမြင့်သီခေါင်၊
မဲဇာချောင်က၊ တစ်တောင်လုံးမှိုင်း၊ စ၍ဆိုင်းသော်၊ တောင်တိုင်းယှက်၍၊
၀န်းကာဝေ့သည်၊ တောင်ငွေ့ဝေေ၀၊ အထွေထွေနှင့်၊ လေလည်းရောရာ၊ မိုးမပါဘဲ၊
သံဝါဖြောက်ဖြောက်၊ ဆီးနှင်းပေါက်လည်း၊ မိုးလောက်ပြင်းထန်၊သွန်းချပြန်သော်၊
ယုဂန်ထင်ရှား၊ တောင်တော်ဖျားက၊ ရထားယာဉ်သာ၊ နေစင်္ကြာလည်း၊ ရောင်ဝါမထွန်း၊
ရောက်လွယ်စေဟု၊စေ့ရေလှည့်လည်၊တလျက်မြည်သည်၊ နေခြည်ဖြာမှ နွေးသော်ကြောင့်။ ။
မျက်မှန်ကြီး တကားကားနဲ့ မှုံ့တဝါးဝါး…ကွန်ပြူတာကို ပြူးပြဲရှာနေရမှာ သနားလို့ .အသင့်ဖတ်လိုက်ပါ..မှုံရွာသားကြီး..https://docs.google.com/file/d/0Bwl_hA7bJaAeNGFjZDIzZmUtYmNkOS00Y2JhLTk3YWEtMmI4MmYyYTFmNGZl/edit?usp=drive_web&hl=en&pli=1..စာဆို ဦးယာရဲ့ မင်းနန်ပျို့
ကဗျာလေးတွေက ၁၀တန်း တုန်းက ထင်တာဘဲ။ နှီးဒေါင်းလန်း ရေ မလိုဘဲ ခွေးပေးလိုက်တာ မှတ်မှတ်ရရဘဲ.. ထို အချိန်က လူနေမှု ဘ၀ကို ဖော်ပြတာဘဲ။
ဒီလိုလေး ရေးခဲ့တော့ နောင်လာ နောက်သားတွေ မျက်စိထဲ ပြေးမြင်မိကြတာပေါ့။
ဒီကင်းစမ်းတောင်ဆိုတာရဲ့အနက်ကို ရှေးကဆရာကြီးတွေအသဲအသန်ငြင်းခဲ့ကြဘူးလို့ မှတ်မိနေတာပါ။
လက်ဝဲသုန္ဒရအမတ်က အဝေးရောက်မင်းလေ သူက ခဏခဏနယ်နှင်ခံရတာ။
အပေါ်ကိုပေါက်တင်တဲ ကဗျာတွေအရဆိုရင်..ရှေးမြန်မာတွေ ..ဆီပြန်ဟင်းစားပုံမပေါ်ဘူး..ကောက်ချက်ဆွဲရမယ်..။
မဲဇာတောင်ခြေ ဆိုတာ ဘယ်အရပ်လဲ.. အခု တိုင်းပြည်ရဲ့ ဘယ်နားများလဲ
မဲဇာတောဆိုတာ မြစ်ကြီးနားသွားတုန်းက ဖြတ်သွားဖူးတယ် ..
ကောလင်းမြို့အလွန်နားမှာလို့ ထင်တာပဲ …
မဲဇာဆိုတာ မန်းလေးကနေ မြစ်ကြီးနားသွားတဲ့ရထားလမ်းဘေးက ရွာလေးတစ်ရွာပါ။
သစ်ပင်တွေအုပ်ဆိုင်းပြီး တောင်အထပ်ထပ်နဲ့ အေးစိမ့်နေတဲ့ဒေသလို့ သတ်မှတ်ရင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်က တော့ ကသာမြို့ကိုသွားရင်ဖြတ်သွားဘူးပါတယ်။
အဲဒီရွာကို ၀င်တော့ မ၀င်ဘူးပါဘူး။
ရှေးတုံးက အဲဒီမဲဇာကို သွားမယ်ဆိုရင် စီးစရာယာဉ်လို့ မြင်း၊နွားလှည်း၊ဆင်ဆိုတာတွေဘဲရှိမယ်ဆိုတော့
မန်းလေးက သွားရင်လေးငါးလ ကြာတယ်လို့ ဖတ်ရဘူးပါတယ်.။
အခုခေတ်မှာတော့ အဲလောက် မခေါင်တော့ပါဘူး။
ပြည်နယ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ စစ်ကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမှာ ပါမလား ကချင်ပြည်နယ်ထဲမှာပါမလားတော့ မသိဘူး။
မဲဇာအရပ်က ပုရစ်ကြော်ရယ် ကောက်ညှင်းကျည်တောက် (ခ)ပေါင်းတင်းက တော့ နာမယ်ကြီးသလောက်စားလို့ကောင်းတယ်။
သြော် …..ခုမှ ပြန်တွေ့တယ် …. ဒီပို့ မှာ ဓာတ်ပုံလေးထည့်လိုက်ရင် အိုကေပဲ
ဓါတ်ပုံ ထည့် ပြီး ပြန်တင်ပါလားဗျ
ဒီဆောင်းပါးရေးပြီးတော့ သံလျင်ကို နှစ်ကြိမ်ရောက်ပေမယ့် ပဒေသရာဇာရဲ့ဂူကို ရောက်ခွင့်မကြုံခဲ့ပါ.
အားပါး တန်ဖိုးရှိတဲ့ပို့စ်ပဲ သူကြီးကလည်းမဲဇာတောင်ခြေနဲ့အားဖြည့်ထားတယ်ရွှေကြည်အရမ်းကြိုက်ခဲ့တာ